शिल्पाले खाएको झापडले केकीलाई पोल्यो- ‘आँशु अझै बाँकी छ’ - Nepal's Digital News Paper
शिल्पाले खाएको झापडले केकीलाई पोल्यो- ‘आँशु अझै बाँकी छ’
प्रकाशित मिति : सोमवार, असार ३०, २०७६
अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलमाथि उनका पती फिल्म निर्माता छवि ओझाले घरेलु हिंसा घटनाले केहि दिन देखि सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म तातेको छ । पति छविराज ओझाले कानको जाली फुट्ने गरी कुटेपछि अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले यतिबेला रेखा थापा र स्वर्गीय गिताञ्जली सुनुवारलाई सम्झिरहेकी छिन् । गिताञ्जली छवि पोखरेलकी दोस्रो पत्नी थिइन । उनले आत्महत्या गरेकी थिइन । गीतान्जलीपछि छविको जीवनमा रेखा थापा आइन । छविसँग विवाह केही बर्षमै सम्बन्ध बिच्छेद भयो । त्यसपछि छविको जीवनमा शिल्पा भित्रिएकी थिइन ।
अहिले शिल्पा र छविबीचको सम्बन्ध निकै तानवपूर्ण छ । छविले कुटपिट गरेपछि उनीहरुको सम्बन्ध महानगरीय प्रहरी परिसरसम्म पुग्यो । सम्बन्ध डिभोर्सतिर लम्किदैछ । छविको ब्यवहार र कुटाइ खाएपछि शिल्पाले यतिबेला रेखा थापा र मृतक गिताञ्जलीलाई सम्भिरहेकी छिन् । ‘उसको हिँसा सहन नसकेर उहाँहरुले छोड्नु भएछ । तर मलाई त्यो थाहा भएन-उनले भनेकी छिन् ।
शिल्पाले आफ्नै पतिबाट पाएको अन्याय अभिनेत्री केकी अधिकारीलाईसमेच असह्य भएकाे छ । शिल्पाले भाेग्नुपरेकाे पीडालाई केकी अधिकारीले आफ्नो फेसबुक पेजमा निकै मार्मिक शब्दमा यस्तो लेखेकी छिन् :
मैले जे भोगेकी छु। जे सहेकी छु। मलाई मात्र थाहा छ। यति भन्दै उनी रोइन्। उनी किन रोइन् ?
उनी रोइन् किनकी उहाँलाई उनले अरुसँग बोलेकै मन पर्दैन रे! उनी रोइन् किनकी आज एकैछिन् अरुसँग बोलेको उहाँले देखि त हाल्नुभो। उनी रोइन् किनकी उहाँ साथ दिने साथी होइन, कमजोरी केलाउने काजी होइबक्सँदोरहेछ। दण्ड दिने हुकुमवाला साुव होइबक्सँदोरहेछ। उनी रोइन् किनकी विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेर आएका उहाँका साथीहरु बीच उनको बौद्धिकस्तर नपुग्दो रहेछ। उनको नपुगेको बौद्धिकस्तरमाथि उहाँले बारम्बार व्यङ्ग्य गर्नुहुँदो रहेछ। उनी रोइन् किनकि उनी मोफसलमा जन्मिएकी हुन्। शहरको ढंग उनले जानिनछिन्। समयमै सिक्न सकिनछिन्। सिक्दा सिक्दै त्रुटीहरु गरिछिन्। उनी रोइन् किनकी तरकारीमा आज नुन कम भएछ। उनी रोइन् किनकि उनीसँग भान्सा कोठा छ। मुख धुनलाई पानी छ। आँसु पुछ्नलाई टालो छ।
उनी रोइन् किनकी आफ्ना देवर, नन्द, आमाजुहरुसँग उनको बोली गुलियो भएनछ। सासुससुरालाई ढोग्‍न बिर्सिछन्। उनी रोइन् किनकी उनी दाइजो कम ल्याउने बुहारी परिछिन्। उनी रोइन् किनकी उनी असल आमा हुन सकिनछिन् । उनी रोइन् किनकी उनी असल ठूली आमा हुन्। सानीआमा हुन्। तर आमा होइनन्। बाँझी हुन्। उनी रोइन् किनकी अलग्गै भविष्य उनको पनि हुनसक्थ्यो। उनी रोइन् किनकी उनीसँग पनि शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र छन्। गाउन सक्ने गला छ। नाच्‍न सक्ने कम्मर छ। उनी रोइन् किनकी पलंगमा एउटा छेउ छ। सुँक्क आवाजलाई दबाउन सक्ने सिरानी छ। आफ्नै श्रीमानबाट बलात्कृत भएको अनुभव छ।
उनी रोइन् आफ्नो प्रेमलाई सम्झिएर। उनी जस्तै कसैको सौभाग्य सम्झिएर। आफ्नो दूर्भाग्य सम्झिएर। गरिब आमाबुवाको सामाजिक प्रतिष्ठा सम्झिएर। उनी रोइन् किनकी आज उनको नानीलाई सानो चोट लाग्यो। त्यही चोटको बहानामा उनलाई ठूलो चोट लाग्यो। उनी रोइन् किनकी उनलाई थप्पड थाहा छ। लात्ती थाहा छ। मुक्का थाहा छ। काट्दा नदुख्‍ने, लुछ्दा दुख्‍ने कपाल थाहा छ। उनी रोइन् किनकी उनी भीडमा पनि एक्लै छिन्। उनी रोइन् किनकी उनी सँग सडकमा मागेर खानुपर्ने दिन आउला भन्‍ने धम्कीले जरा गाडेको मन पनि त छ। उनी रोइन् किनकी सहनशीलताको बाँध भत्किएको छैन। आँसु अझै बाँकी छ।
उनी रोइन् किनकी उनले आज न्याय माग्‍ने हिम्मत गरिन्। उनी रोइन् किनकी न्याय माग्दा, व्यथा बुझ्ने न्यायमूर्ति पाइनन्। उनी रोइन् किनकी थप्पड हान्‍नु नै अपराध हो। तिमीले न्याय पाँउछौ भनेको सुनिनन्। उनी रोइन् किनकी उनलाई उल्टै कुरा सोधियो, के त्यो थप्पडले कानको जाली फुटेकै हो त ? उनी रोइन् किनकी उनीले जे भोगेकी छिन्। जे सहेकी छिन्। उनलाई मात्र थाहा छ।
तपाँई हामी बीच भएका सबै ‘उनी’ हरुलाई घरेलू हिंसा बिरुध्द बोल्ने साहस मिलोस्। साहसी सबैलाई न्याय मिलोस्।
सुदूपश्चिममा गौराको रौनक, डेउडामार्फत् ब्यङ्ग
कलाकारहरुले एउटै स्वरमा भने ‘रवि लामिछानेमाथी निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविन होस्’
म नरम र चाम्रोबीच सहज लेखनको बाटोमा रहेछु : धर्मेन्द्र नेम्बाङ
राजधानीको टुँडिखेलमा मनाइयो गौरा पर्व
१ लाख राशिको बीपी साहित्य सम्मान वैरागी काइँलालाई
आज गौरा पर्व, हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै, सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक विदा